မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုံ | Ko Oo + Ma Thandar
« ခရစ်တော်ဖွားမြင်ရာ လူသောင်းချီစုရုံး
မြန်မာ့အရေး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဆွေးနွေး »
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအနီးမှာ ဧကတသိန်းခွဲကျယ်တဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်ဖို့ ထိုင်း-အီတလီကုမ္မဏီနဲ့ မြန်မာဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်တို့ နိုဝင်ဘာလ အစောပိုင်းက လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း၊ တသောင်းသုံးထောင်ကျော်ကုန်ကျမယ့် (၁၀) နှစ် စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ အနီးက စက်မှုဇုန်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေစည်းကမ်းတွေ တင်းကျပ်လာတဲ့အတွက် ဂျပန်ကုမ္မဏီ အပါအဝင် လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာ ထားဝယ်ကိုပြောင်းဖို့ စိတ်ထက်သန်နေကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာသစ်ကုမ္မဏီ (၂) ခုဟာ ထားဝယ်မြို့ နယ်မှာ မြေဧက (၂၀၀၀) ကျော်ကို လျှော်ကြေးမပေးပဲ သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက် ဧရာဝတီသတင်းက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် သတ်မှတ်တိုင်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းမှု၊ အကျိုးအမြတ်ရဖို့ မသေချာမှု၊ လုပ်နည်းလုပ်ထုံး ရှုပ်ထွေးကြန့်ကြာမှု၊ တရားမဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ များပြားမှု စတာတွေကြောင့် ရည်ရွယ်ချက် မအောင်မြင်တဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုံတွေလည်းရှိကြောင်း သြဂုတ်လထုတ် အေဒီဘီ – အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် သုတေသနဌာနစာတမ်း အမှတ် (၂၃၇) မှာ ပါမောက္ခ Peter Rimmer နဲ့ Howard Dick တို့က သုံးသပ်ထားပါတယ်။ မြဝတီ-မဲဆောက် လို နယ်စပ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ မှောင်ခိုလုပ်ငန်း၊ ဥပဒေမဲ့ ဝင်ရောက်မှု၊ သစ်ခိုးထုတ်မှု စတာတွေလုပ်နေလို့ စီးပွားရေး တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းကို မြန်မာဘက်မှာ လာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာရင် ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေ နည်းပါသွားနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted on December 24, 2010 at 1:34 pm and is filed under ဆောင်းပါး, ဖြန့်ဝေခြင်း.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.